गोलखडा सदरमुकाम कार्यान्वयन नभए जनसागर सहितको आँधीहुरी ल्याउने तयारि « Postpati – News For All
गोलखडा सदरमुकाम कार्यान्वयन नभए जनसागर सहितको आँधीहुरी ल्याउने तयारि
माघ २१, रुकुम पूर्व । रुकुम पूर्वको गोलखडा सदरमुकाम कार्यान्वयनको लागि दबाबमूलक कार्यक्रम भोली माघ २२ गते गोलखडामा हुने भएको छ । गोलखडा सदरमुकाम स्थापनार्थ सरोकार समितिको आह्वानमा अस्थाई सदरमुकाम रुकुमकोटमा हुने भनिएकोमा दुबै पक्ष आक्रामक हुने र जनधनको क्षति हुने भएकोले मन्त्री परिषद्ले तोकेको सदरमुकाम गोलखडामै भव्य रूपमा दबाबमूलक कार्यक्रम हुने कुरा सरोकार समितिका सदस्य पुनिराज घर्तीले बताए । नेता घर्तीले भने -‘दुबै पक्षको आ-आफ्नै आन्दोलन हुने भएकोले अनावश्यक झडप हुने भएको आशँकामा प्रशासनले कर्फ्यु आदेश जारी गरेको हुँदा हामीले सरकारले तोकेकै सदरमुकाम गोलखडामा भव्य रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने दबाब कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका हाैँ ।”
रुकुमकोटमा कार्यक्रम हुने मिति र स्थान समेत तय भएकोमा एकाएक किन यसरी स्थान परिवर्तन गरिएको ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा नेता घर्तीले भने -‘लडाइँमा परिस्थिति अनुसार लड्ने तरिका बदल्नु पर्ने बाध्यता आउँछ । हामीहरू डराएर गोलखडामा कार्यक्रम सारेका होइनाैँ ! आखिर सरकारले घोषणा गरेको त गोलखडा हो नि ! हामीले त्यही ठाउँबाट सरकार र सर्बोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गर्ने सोँच बनाएका छाैँ । कार्यक्रम उहीँ हो । दबाब उहीँ हो । स्थान मात्र परिवर्तन गरिएको हो ।”
यसरी लम्बेतान हुनुमा कसको दोष छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने -‘जनप्रतिनिधिको माैनताले गर्दा नै सदरमुकाम परपर सरेको हो। यसले कुन नेताको वास्तविक चरित्र के हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।” उनले गोलखडामा नै जनसागरको आँधीहुरी ओर्लिने छ र यसले सर्बोच्च र सरकार दुबैलाई ध्यानाकर्षित गर्ने कुरामा दुविधा रहने छैन भन्ने कुरामा आफुहरू स्पष्ट रहेको जानकारी गराए ।
माघ २२ गते विहानको दस बजे गोलखडामा भव्य दबाबमूलक कार्यक्रम हुनेछ । आज सबै जनताको लस्कर गोलखडातिर केन्द्रित हँदैछ ।